POTATO IRBITSKY - SHARAXAADA KALA DUWANAANTA, SAWIRRADA, TALOOYINKA KORITAANKA - BEER CAGAARAN
Sida loo abuuro baradhada "Irbitsky" - noocyo badan oo aad u sarreeya oo badan: sawir iyo sharax
Wixii ku saabsan jiritaanka gaaban, kala duwan Irbitsky ee baradho u suurtagashay in ay ku guuleystaan ​​tiro badan oo taageerayaal ah ee beerta.
Ku qosol, waxa ugu sarreeya, ee digriiga dhadhan fiican leh iyo qurux badan, wax-soosaarkooda sare iyo aan qabyo-qabin.
Baradkani wuxuu awoodaa inuu la qabsado xaalad kasta oo sii kordhaysa, waxaana uu ku filan yahay inta badan cudurada habeenkii.
Qeexida noocyo Irbitsky
Magaca dugsiga Irbit
Sifooyinka guud dhexdhexaad ah miiska kala duwan oo leh xitaa digriiga iyo ku habboonaanta xaaladaha
Wakhtiga uurka 65-70 maalmood
Mawduucyada Starching 12-17%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 100-185 g
Tirada digriiga duurka 6-10
Yield 250-400 kg / ha
Tayada macaamilka dhadhan wanaagsan, oo ku haboon saxarada
Soo kabashada 97%
Midabka maqaarka casaan
Gobollada la doorbido Volgo-Vyatka, Galbeedka Siberia
Cadaadiska cudurada dhexdhexaad ah si phytophthora, adkaysi u nematode cyst baradhada dahabka
Noocyada sii kordhaya heerarka agrotechnical
Asalka "Europlant Pflanzenzucht GmbH" (Jarmal)
Baradhada Irbitsky badanaa waxay u sabab tahay noocyada dhexe ee Bisaylkiisa, tan iyo muddada biqilka ka dibna farsamada farsamo waa 70 ilaa 90 maalmood. Waxaa lagu taxay Diiwaanka Gobolka ee Ruushka ee beerista beeraha Volga-Vyatka iyo Galbeedka Siberian, laakiin sidoo kale wuxuu ku baahiyay dhulalka dalalka kale - Ukraine iyo Moldova.
Laga soo bilaabo hal hektar oo dhul ah waxay badanaa ka soo ururiyaan 250 ilaa 400 sentar oo baradho ah.
Mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee muhiim u ah marka la dooranayo noocyada kala duwan ee beerashada waa dhalidiisa. Jadwalka hoose waxaad ku arki doontaa dabeecadahan noocyo kala duwan oo lagu soo bandhigay boggeena:
Irbit 250-400 kg / ha
Santa ilaa 570 c / ha
Gingerbread Man 450-600 doolar / ha
Blue-eyed ilaa 500 kg / ha
Adretta ilaa 450 kg / ha
Baradhada cas ee casri ah ayaa ah mid kala duwan dhadhan cajiib ah oo leh ballamo miiska.
Ma soo rogeyso shuruudo gaar ah oo ku saabsan qaabka ciidda, laakiin waxa ay dareemeysaa ugu fiican carradaas halka cawska sanadlaha ah ama cawska, qoryaha, horay u koray. miraha iyo jiilaalka. In ciidda bacaadka ah, noocyada this waxaa la beeray karaa ka dib markii lupine.
Kala duwanaanshahaa ayaa si fudud u dulqaadanaya abaarta waxayna u adkeysi badan tahay dhaawaca.
Waxaa calaamad u ah cudurada halista ah sida kansarka baradhada, nadiifinta dahabka ah ee baradho ah, dabaylo goor dambe ah, xoqan iyo xajmiga maskaxda, iyo sidoo kale fayraska curdanka caleenta.
Qoryaha semi-qumman ee warshadani waxay leeyihiin dherer celcelis iyo nooc dhexdhexaad ah. Waxay ku daboolan yihiin caleemo madow oo cagaar ah oo leh cidhifyo qoyan, xajmiga kaas oo ka badan celceliska. Corolla waxaa lagu gartaa midab dhexdhexaad ah oo xoog leh anthocyanin midabka gudaha.
Noocan ah sifaha barafka digriiga wareegsan leh indhaha yaryar. Waxay ku daboolan yihiin maqaar guduudan, oo ay ku hoos jirto iftiin jilicsan oo jilicsan. Miisaanka xididka wuxuu ku kala duwanaan karaa 108 illaa 190 garaam, iyo walxaha dhererka ee baradho waxay ku taal heerka 13.0-16.5%.
Noocyada Irbitsky waxaa lagu dhalaaliyay beeraha Ruushka ee 2009kii.
Stability waa dabeecad kale oo muhiim u ah baradhada. Jadwalka hoose waxaad ku arki doontaa tusahan tilmaamahan noocyada kala duwan ee baradhada:
Gabadh gabar ah 92%
Kala duwanaanta cagaarka ayaa si wanaagsan loo hayaa. Akhriso wax badan oo ku saabsan wakhtiga kuleylka iyo wakhtiga kaydinta, dhibaatooyinka suurtagalka ah. Iyo sidoo kale ku saabsan sida loo keydiyo xididada jiilaalka, sawir qaadaha iyo balakoonka, qaboojiyaha iyo diirran.
Fiiri sawirka: Baradhada Irbit
Beerto ee baradho ku jirta dhul furan la qabtay bishii May. Masaafada u dhaxaysa dhirta waa inay ahaataa 60 sentimitir, iyo inta u dhaxeysa saf - 35 sentimitir.
Marka beeritaanka, abuurku waa inuu tagaa dhulka 8-10 sentimitir. Hawlaha ugu muhiimsan ee daryeelka dhirta inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya waa inay dabciyaan ciidda iyo hilling of dhirta, iyo sidoo kale ka saarto haramaha ama mulching, waraabiyo.
Qoto dheer oo ah dabacsanaanta ugu horeysa waa inay ahaataa 10 ilaa 12 sentimitir, iyo marka xigta - 6-7 sentimitir.
Hilling ugu horeeya waa in la sameeyaa marka dhirta ay gaarto dhererka 15-17 sentimitir, halka cabbirka ciidda waa inuu yahay 18-20 sentimitir. Hilling xiga waa in la sameeyaa ka hor inta aan la xirin dushooda.
Cabbitaanka aan macquul ahayn waa in lagu daraa codsiga macdanta iyo bacrimiyayaasha organic. Inta lagu jiro hal xilli waa lagama maarmaan in la fuliyo wax ka badan seddex siyood oo noocaas ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo abuuro baradhada, goorta iyo sida loo dalbado bacrimin, sida loo sameeyo marka la beerto.
Meel aad u muhiim ah beerista baradho ayaa lagu buufiyaa daroogo kala duwan.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan isticmaalka herbicides, fungicides iyo cayayaanka.
Barafka noocan ah waa wax caadi ah ma ahan kuwo u nugul cudurada la yaqaan. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka ku saabsan cudurada habeenkii ayaa laga yaabaa inay kuu faa'iidooto. Akhri dhammaan wixii ku saabsan Alternaria, Fusarium, Scab, Verticillis.
Laga soo bilaabo weerarka cayayaanka, waxaad ku badbaadin kartaa daawooyinka cayayaanka. Baradhada Irbitsky qiimeeyay bannaanka u for ay qabaan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan baradho-baradho Colorado iyo dirxiga, iyo tallaabooyinka looga hortago - daaweynta kiimikada iyo dadka. Iyo sidoo kale wax kasta oo ku saabsan aboorka baradho iyo daroogooyinka ka dhanka ah, wireworms iyo siyaabaha looga takhaluso cayayaan this.
Iyo sidoo kale - fududahay sii kordhaya, dhalid aad u fiican, sifooyinka sare ee badeecada iyo dhadhanka weyn, iyo sidoo kale tayada ilaalinta wanaagsan.
Sidoo kale akhri dhammaan siyaabaha kala duwan ee barafka sii kordhaya: Tiknoolajiyada Dutch, dalagga oo aan lahayn jaridda iyo hilling, cows, bacaha iyo foosto, sanduuqyada, laga bilaabo abuurka. Oo weliba, sida, si ay u koraan noocyo hore iyo sida loo soo rogo geeddi-socodka ganacsi.
Xilliga dhexe Gaar ahaan hore Taageero
Sonny Jacayl Beeraha
Crane Rabbi ee isdhaafka Meteor
Magician Rodrigo Kiranda
Zhuravinka Jelly Zhukovsky hore
Blueness Tafsiir Riviera